SABABTA AY TAHAY FOORNADU WAXAY KU FAAFTAA DABOOLKA: 4 SABABAHA UGU BADAN - BEERAHA DIGAAGA
Waa maxay sababta ay duufaantu u fidiso daboolka
Roobabka ayaa ah wakiillada ugu weyn ee amarka digaagga, si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo qaraabadooda, kuwaas, kuwaas oo ah ragga, waxaa lagu kala duwan yahay qurux aan caadi ahayn.
Waxay heleen caan weyn oo ay sababeen baalasha dheer, taas oo lagu muujiyay qaabka fanaanka ee ku yaalla meesha daboolka ah.
Tixgeli sida ay yihiin baadooyinka, iyo sidoo kale xaaladaha ay shimbirahaasi ku faafayaan daboolka.
Sidee ayay foostadu u fidisaa daboolka iyo daboolka
Qof kasta oo waligiis arkay shimbiraha quruxda badani waxay ogyihiin in ay haystaan ​​dabo qurux badan oo gadaal u soo maraya tareenka. Si kastaba ha ahaatee, dad yar ayaa ogaanaya in baadad waaweyn oo cufan, oo ku rinji midabada dhalaalaya, dhab ahaantii maaha dabo. Dhakhaatiirta 'Ornithologists' ayaa qaybtan qaybta ugu yeedha, waxay ku koraan dhabarka ragga. Daboolka wuxuu ku yaalaa bucooyinka iftiinka ah, waxay u adeegtaa sidii taageero "fan" ah oo meel bannaan oo muuqaal ah.
Baro naftaada dabiiciga ah, iyo sidoo kale inaad ogaatid sida daaqada iyo dhirta cad ee muuqata oo nool.
Iyada oo ku xiran nooca shimbirta, noocyada midabka midabka ee buluugga ah waa buluug ama cagaar, laakiin waxaa jira sambabyo leh dahab ama madow. Bartamaha baaluq kasta waa indho cad. Xayawaanku waa kuwo waaweyn oo cufan, dhererkoodu wuxuu gaari karaa ilaa 160 cm. Xaaladda furan, "fan" ayaa furan ilaa 300 cm ballaaran.
Sababaha furitaanka baadiyaha
Habka loo arko shimbirahan, fayoqobiyeyaashu waxay qeexeen dhowr sababood oo ka dhalatay duufaannada oo soo daayay dabadooda quruxda badan. Ka fikir iyaga.
Ma taqaanaa? Ka dib markii ay haweenaydu ogolaatay midawga, daangiggu wuxuu u jeedaa dhabarkeeda. Khubarada oo kaliya ayaa ogaanaya in ay tahay boogaha gaaban ee gaaban iyo dhabarka in da'da ragga, xaaladda caafimaadkiisa iyo xoogga la go'aamin karo, taas oo haweenku sameeyaan.
Inta badan waxay aaminsan yihiin in quruxda noocaas ah la siiyay ragga kaliya si ay u soo jiito haweenka bilawga noloshooda oo dhan. Dumarka ayaa ka baxaya "fanaan" wuxuuna bilaabay in uu qoob-ka-cayaaro midka la doortay, isaga oo biya-baxaya oo uu ku dhimanayo waxyaabo cajiib ah.
Inta lagu jiro xilliga maadada, shimbir kasta wuxuu rabaa inuu qaato booska ugu faa'iidada badan. Isagoo sharaxay asxaabtiisa, ninka ayaa raba in ay ku jirto xaaladaha ugu wanaagsan. Si taas loo gaaro, wuxuu badanaa ku qasban yahay in uu xalliyo waxyaabaha kale ee dafafka kale, si uu ula tartamo iyaga.
Waxa kale oo aad xiiseyneysaa inaad barato sida loo abuuro duurjoogta guriga, sida loo quudiyo barafka iyo in hilibka digaaga lagu cuno loo cuno.
Iskuduwaha waxaa lagu xalliyaa adoo muujinaya weynaanta badhida ilaa inta cadawgu ka baxo.
Neeska "fananka" ee shimbirta ayaa sidoo kale ah macnaheedu yahay in lagu carqaladeeyo geela. Marka ay ku dhow yihiin buulka, duufaanku waxay ku duuduubinayaan dadka uurka leh iyagoo gacan ka helaya dhirta quruxda badan waxayna ka kaxeyneysaa meesha ay haweeneyda ku leedahay ukun ama chicks.
Waa muhiim! Waddamada qaarkood, waxaa la rumaysan yahay in haysashada bucooyinka daadadka ee guriga dhexdiisa ay tahay musiibo.
La xiriirka qaraabada
Dad tiro yar ayaa og in bacaabada rujineysa ay sidoo kale tahay hab isgaadhsiin ah oo ka dhexjirta duurjoogta. Waxaa soo baxday in marka xagasha ee dillaac of baadad isbedel iyo dhaqdhaqaaq yar, waxay daabacaan jebin leh taas oo shimbiraha hadal.
Miyuu dumarku dumarku leeyihiin dabo
Tan iyo markii aan ogaanay in baadad dhaadheer, taas oo ay kala soocaan raga diinta ka soo jeeda dheddigga, ma yihiin dabo, su'aashu waa mid aan caqli ahayn. Shimbirahaas, iyada oo aan loo eegin jinsiga, waxay leeyihiin dabo yar, laakiin waa gaaban oo aan shaacin.
Roobabku waa shimbiro aad u qurux badan, ragga ayaa si gaar ah u istaagaan gaar ahaan marka ay muujiyaan "fanaan" midab leh gadaashooda. Ku daawashada xilligan xaadirka ah waa farxad!